China Umlilo kunye nobushushu Resistant Long Isikhumba Welding kunye zomlilo Safety Iziqhano abenzi kunye nabathengisi | Joysun
Umlilo kunye nobushushu Resistant Long Isikhumba Welding kunye nezikhuselo zomlilo Safety
Inombolo yomzekelo: WCBB08
Igama Product: Umlilo kunye Ubushushu Resistant Long Isikhumba Welding kunye Iziqhano Fireplace Safety
Ukusetyenziswa: Ukumelana nomlilo
Umbala weMveliso: luhlaza okwesibhakabhaka + tyheli
UKHUSELEKO OLUQHELEKILEYO LWE-HEAT: Iiglavu zewelding ziqinisekisiwe ukumelana nobushushu obugqithisileyo ukuya kuthi ga kwi-932 ° F (500 ℃) .Ingaphakathi yeiglavu zine-100% yokubila okuthambileyo okufunxa umaleko womqhaphu ukuze uthambe kwaye uxhathise ubushushu, okwenza ukuba iiglavu zilungele ukuwelda, ukubamba izinto ezishushu Njengokutsha kwamalahle okanye ukhuni kunye ne-oven yobushushu okanye i-cookware. Isiphatho esifanelekileyo sokuphatha isilwanyana esifana nenja YENKATHA YENKONZO YOKUPHILA ngokulunywa!
UKHUSELEKO LOKUQHUBA KWAMAFUTHA: Iiglavu ezinde ezili-14 ezongezelelekileyo ezinemikhono emide zikhusela iingalo zakho ekugayeni inkunkuma, iintlantsi zentsimbi, amalahle ashushu kunye namalangatye avulekileyo, izinto ezishushu zekhitshi kunye nomphunga oshushu. Ukusebenza nakwimeko ezigwenxa.
UKUQINISEKISA OKUQHUBELEKILEYO UKUBHADA KWI-FINGERS, I-PALMS & BACKS: iiglavu ziye zaqinisa ukukhusela kwiminwe, iiPalms & Backs, Ukubonelela ngokhuselo olugqithisileyo lobushushu ukusingatha imisebenzi enobungozi obuphezulu kwaye ibenze kungabikho lula ukuyinxiba.
EBANQAMILEYO NOKUQINILE: Iiglavu ze-BBQ ze-Welding zenziwe ngononophelo olukhethiweyo kunye nokuthamba kwamagxa okwahlula isikhumba semfuyo esinganyangekiyo shushu, i-oyile enganyangekiyo, enganyangekiyo, enganyangekiyo ngumlilo kunye nesikayo. Ezi zibini zeiglavu zomsebenzi onzima ziya kuhlala ixesha elide.
IIMULTI-UMSEBENZI WAMADODA NABAFAZI: Ayenzelwanga ukuwelda kuphela kodwa ayanceda nakweminye imisebenzi emininzi kunye nasekhaya. Umbono weGrill, iBarbecue, isitovu, isitovu, indawo yokubasa umlilo, ukupheka, ukuthena iintyatyambo, ukwenza igadi, inkampu, umlilo wasenkampini.
Luhlaza okwesibhakabhaka + tyheli
Egqithileyo Iiglavu zeCrinkle Latex Rubber Hand Coated Work Work
Iziqhano Zesandla Sokhuseleko
Iindidi zeGlavu zoKhuseleko zeSandla
Iziqhano Zokhuseleko Zesikhumba
Khuselo Labour Iziqhano Long yesikhumba Welding Sa ...
iiglavu eziluhlaza ezinde eziluhlaza
Iiglavu zefanitshala zexabiso eliphantsi zeFYDR4
Iiglavu zesikhumba zeWCBB02 eziluhlaza okwesibhakabhaka ngqo
CACBPL isikhumba iiglavu zasebusika mfumba lining